Iintlanzi zeplaty | Ngeentlanzi
Los intlanzi eplaty, ekwabizwa ngokuba lihlabathi lezenzululwazi njenge Xiphophorus Maculatus, basuka kwilizwekazi laseMbindi Merika, kanye besuka kumazwe afana neGuatemala, iHonduras neMexico. Ngokuqhelekileyo zifumaneka kumanzi apholileyo anezityalo ezininzi kunye neengcambu apho zinokubalekela khona kwaye zizifihle kumarhamncwa.
Le ntlanzi incinci zibonakaliswa ngokuba nemilo edibeneyo kunye nesisu esijikeleziweyo, esokugqibela sibonakala ngakumbi kwabasetyhini kunakwindoda. Umlomo wayo ubekwe kwindawo ephezulu, ngenxa yeminqamlezo emininzi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kukho iintlobo ngeentlobo zeentlanzi zeplaty, ezahlukileyo ngemilo efana nesigqubuthelo, inaliti okanye umsila webrashi; kwaye yahlukile ngombala wazo, njenge-wag-tail, i-tuxedo, i-mottled, kunye ne-Mickey mouse.
La Umbala wokuqala kaPlatyOko kukuthi, ngelixa izilwanyana zisendle okanye kwindawo yazo yendalo, inemibala engeyiyo, ayinabukhazikhazi, inamaphiko amancinci kakhulu. Nangona kunjalo, ekuthinjweni, kuba nawuphi na umbala kunye naluphi na uhlobo lomxube phakathi kwabo luvumelekile, banokuba nemibala ethe kratya, njengombala ubomvu, tyheli kuwo wonke umzimba wabo, orenji, phakathi kwabanye.
Ukuba ucinga ezi zilwanyana kwi-aquarium yakhoKubalulekile ukuba ugcine engqondweni ukuba iPlaty ikhetha indawo enamanzi ekhanyiswe kakhulu, kodwa ngaphezulu kwayo yonke ityalwe kakuhle kwaye inemimandla emikhulu ukuze ikwazi ukudada ngokukhululekileyo kwaye ifihle kwaye idlale ngendlela othanda ngayo. Ke ukuba sibanika indawo eyoneleyo, kunye nezityalo ezahlukileyo abanokuzisebenzisa njengeendawo zokufihla, ngokuqinisekileyo baya kuziva bekhuselekile kwaye sihlala sibabona bedada bonwabile.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezi ntlanzi zidlamkile, kwaye zizolile, ngokubanzi azikhokeleli kungqubano oluncinci ngaphandle kwemiphumo emibi okanye emikhulu. Kungenxa yoko le nto kule minyaka idlulileyo bezizilwanyana ezizithandayo ukubanazo ekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Iintlanzi zeplaty
Sele ndinayo le ntlanzi intle
UJorge Rosas sitsho
Imibuliso emyoli, ezi ntlanzi zingadityaniswa nabadanisi kunye neeteleskopu?
Phendula Jorge Rosas
mangaphi amaqanda anokubakho kwiintlanzi zeplaty?
kulungile ndinePlaty pes kunye neNeon
Kwaye ndinentlanzi zembumbulu